Faits-Divers – Page 1028 – Midi Madagasikara
Ampefiloha : Mpangarom-paosy 3 mianadahy tratra
Ny alakamisy teo no tra-tehaky ny pôlisim-pirenena tetsy Ampefiloha ireto mpanendaka 2 lahy sy vavy 1 , izay tena nampiaiky ny teny amin’ny farItra Ampefiloha sy Anosy ary Ampatsakana iny. Efa nisy nahatsikaritra izy ireo tamin’izany , ka olona tsara sitrapo no nanome vaovao ny pôlisy. Mody misisika taxi-be eo izy telo ireto, ka tamin’izany no nanaovany…
Ankadikely-Ilafy : Voatsatoky ny fantsika rezatra ny masony
Salama tsara izy no tonga tao amin’ny hopitaly. Tsy nisy rà nivoaka ihany koa na dia kely monja aza. Saingy fantsika rezatra efa harafesina be no nitsatoka teo amin’ny masony. Izay no hita teny an-toerana tamin’ny fotoana nanateran’ny fiarakaretsaka ity zazavavikely latsaky ny folo taona teny amin’ny hopitaly Hjra omaly. Rehefa nanontaniana ny zavanisy dia…
Behoririka : Kidnapping d’un Karàna par quatre hommes armés
Il est le patron d’une boulangerie à Behoririka, outre sa fonction de directeur logistique auprès d’une grande société dans la capitale. Ce ressortissant karàna a été victime d’un kidnapping dans la soirée de samedi dernier. Vers 19 heures, au moment où l’endroit allait être fermé, quatre hommes munis d’armes à feu y ont fait irruption.…
Analakely : Roalahy voatsindrona antsy, maty ny iray
Teo ambany kibo ilany havia no nitsatoka ny antsy ho an’ny iray. Teo ambany kelin’ny tratrany havia kosa ho an’ny faharoa. Itsy voalohany dia lehilahy 35 taona raha 49 taona kosa ilay faharoa. Samy voatsindrona antsy izy ireo omaly vao maraim-be, tokony ho tamin’ny telo ora tany. Efa very rà be izy ireo no tonga…
Vol MD 318 : Sit-in des passagers hier à l’aéroport
Le vol national MD 318 en partance de la capitale et à destination de Sambava a fait l’objet d’un mécontentement d’une partie de ses passagers hier. « Il a été prévu dans nos documents de vol que l’avion serait un Boeing. A la dernière minute, on nous a annoncé qu’il s’agit d’un twin-otter et finalement c’était…
Ankorondrano : Exeia fivarotana vaovao
Ny asabotsy teo no nampahafantarina ny be sy ny maro ny fisokafan’ity fivarotana iray momba ny kojakoja infôrmatika sy ny fitaovana fikarakarana endrika amam-bika. Marihana fa ao amin’ny Zoom no misy azy ity ary efa herin-taona mahery izay no nisokafany, fa talohan’izao kosa dia varotra amin’ny alàlan’ny tranon-kala no nanaovana ny kômandy , ary iray…
« Coup d’arrêt » : Ben’ny tanàna sy Chef Zap karohina
Nohazavain’ny zandary amin’ny antsipiriany ankehitriny ny fizotran’ny hetsika “coup d’arrêt” ary hita tao anatin’ny tatitra ny fisian’ny ben’ny tanàna sy Chef Zap izay kaorihina ankehitriny. Ny 15 jiona no tonga tany an-toerana ny mpitandro filaminana ary avy hatrany dia nanao fisafoana ny alan’Ambohitsy-Ifotaka. Ao no voalaza fa fametrahan’ireo dahalo ny omby avy nangalariny. Ny 16…
Ambositra : La peste tue quatre personnes
Redaction Midi Madagasikara 21 juin 2014
Après la mort suspecte de deux personnes dans le village de Kianjandrakefona, dans le district d’Ambositra, la famille des victimes a saisi les autorités compétentes à savoir, les responsables du CSBII et de la gendarmerie. Le 18 juin dernier, la mort de ces deux personnes reste inexpliquée pour les proches. Alertés, les responsables ont immédiatement…
Andrononobe : Mpivarotra sy mpifoka rongony efa-dahy tratra
Ny 19 jiona teo no nahazo loharanom-baovao tany amin’ny olon-tsotra ny polisy misahana ny ady amin’ny zava-mahadomelina etsy Anosy fa misy lehilahy mpivarotra rongony eny Andrononobe Analamahitsy. Nidina teny an-toerana avy hatrany ny polisy ny androtr’io ihany, tany ho any amin’ iray ora antoandro tany ho any. Tra-tehaka tao an-tranony ity lehilahy iray izay mitondra…
Ikopa : Razana efa simba natsingevan’ny rano !
Mbola nahitàna fatin’olona indray teo amin’ny reniranon’Ikopa omaly. Razana efa potika, ny karan-dohany aza efa natsingevan’ny rano, no hitan’ny olona. Hita teo ihany koa ny vatany ary mbola misy akanjo. Teo amin’ny mifanandrify an’Anosizato no nahitàna ity tranga nahatsiravina ny maro ity. Lehilahy izy io rehefa notsirihan’ny manam-pahaizana. Ny akanjony rahateo sy ny bikabikany dia…
← Previous 1 … 1 027 1 028 1 029 … 1 155 Next →